Suurto Gal Miyaa In Somaliya , Itoobiya Iyo Erteria Ay Yeeshaan Hal Madaxweyne ? + Akhriso |
Suurto Gal Miyaa In Somaliya , Itoobiya Iyo Erteria Ay Yeeshaan Hal Madaxweyne ? + Akhriso
Addis Ababa (GNN):- Hoggaamiyeyaasha dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ayaa dhawaan kulan ku yeeshay magaalada Bahr Dar ee dalka Itoobiya halkaas oo ay kaga wada hadleen heeshisyadii taariikhiga ahaa ay ku kala saxiixdeen Asmara.
Waxyaabihii inta badan kulanka kaddib la hadlayay waxaa kamid ah arrinta ku saleysan suuragalnimada ah inay midoobaan dalalkan mustaqbalka.
Haddaba su’aasha laisweydin kara, ayaa ah, shacabkan dalalkan ma yihiin kuwo sidaasi isugu dhawaan karaan marka ay timaato midnimada iyo shaqaynta nabadda?
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ka hadlayay munaasabad ay ku qalin jebinayeen ardeyda jaamacadda ku taalla magaalada Bahr Dar ayaa sheegay inuu rajenayo mustaqbalka in dalalka Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya ay yeeshaan hal madaxweyne.
“Waxaan rajeynaya saddexdan madaxyweyne ee halkan taagaan carruurtoodu inay arki doonaan saddexdan waddan ee aan ka kala nimid oo hal madaxweyne leh oo aanan saddex mdxaweyne lahayn ” ayuu yiri Abiy Axmed oo ay goobta kula sugnaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki.
Suuragalnimada mideynta saddexdan dal
Feysal Rooble oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay in arrinta midnimada Itoobiya iyo Soomaaliya in badan lagu haminayeen isla markaasna aysan ahayn markii ugu horreysay ee arrimahaasi lasoo hadal qaado.
“Wakhtigii Mengistu Hailemariam iyo Siyaad Barre waa tii Yemen laisugu geeyay, Fidel Castro arrintaasi ka duqeeyay sidii Soomaaliya iyo Itoobiya dal looga wada dhigi lahaa…Laakin wax hadda waaqici ah ma hayno” ayuu yiri Feysal Rooble.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Eritrea ma aysan carabaabin arrinta ku aadan mideynta dalalkan balse waxay ka hadleen sidii looga shaqayn lahaa horumarka iyo xiriirka diblumaasiyeed ee saddexda dal.
In dalalka Soomaaliya , Eritrea iyo Itoobiya ay yeeshaan hal madaxweyne waa arrin aanan suuragali Karin, iyadoo Eritrea uu ka taliyo madaxweyne muddo badan dalkaasi ka arriminayay, Itoobiya waxaa ka taagan khilaafaad u dhexeeya bulshooyinka halkaasi wada dego halka Soomaaliya aysan nabad ka jirin, ayuu ka dhawaajiyay Feysal Rooble.
Ma aheyn markii ugu horreysay uu hadalkan ka dhawaajiyo Abiy Axmed, markii uu soo booqday dalka Soomaaliya wuxuu ra’iisul wasaare Abiy Axmed sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay midoobi doonaan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay aqoonyahan Feysal Rooble.
“Madaxweyne Farmaajo kama uusan hadlin labadan dal oo la mideynayo…waxaan kala gareynin in laab la kac Abiy Axmed xaggiisa ka tahay iyo in kale, waxaana hadda soo caddaaneysaa inuu yar caadif yahay isagoo wanaaga jecel sida ay u muuqato inuu ka hadlo waxyaabo aanan weli lasoo bislayn” ayuu yiri Feysal.
Sida uu qabo, Feysal mideynta ma ahaan mid hadda jirto oo la hubo balse waa arrin lagu rajo weyn yahay.
Hoggaamiyeyaasha Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dhawaan kulan saddex geesood ah kusoo gabagabeeyay magaalada Bahr Dar ee dalka Itoobiya waxayna ka wada hadleen sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen heshiiskii bilooyin ka hor ay ku kala saxiixdeen Eritrea.